Semalt Inokurudzira 3 Nyore Matanho Ekutora Web Content
blogs, iwe unofanirwa kudzidza dzimwe shanduro mitauro yakadai saC ++ uye Python. Munguva pfupi yapfuura, taona zvakasiyana-siyana zvine ruzivo rwehupfumi hwemashoko paIndaneti, uye dzakawanda zvezviitiko izvi zvinosanganisira zvigadzirwa kupora zvishandiso uye automated mirairo. Kune vashandisi veWindows neLinux, matanho akawanda web scraping akavakwa anogadzirisa basa ravo kusvika pamwero. Vamwe vanhu, zvisinei, vanosarudza kuputira zvigadzirwa nemunhu, asi zvishoma zvishoma-kutora.
Pano takakurukura matanho matatu nyore kuti tibate webhuhu mumaminitsi masere makumi matanhatu.
Zvose zvinoshandiswa nemushandisi ane utsinye ndezvi:
1 - rastrear um produto nos correios brasil. Tsvaga chinhu chiri muIndaneti:
Unogona kuedza chero purogiramu yakakurumbira yewebhu web scraping yakadai seActcty, Import. Io, naPortia kuburikidza neCrapinghub. Tumira. Io inonzi inoparadza mapeji e-mamiriyoni mana eInternet. Inogona kupa ruzivo rwakakosha uye rune chinangwa uye inobatsira pamabhizimisi ose, kubva pakutanga kusvika kune mabhizimusi makuru uye mazita anozivikanwa. Uyezve, chidziro ichi chakakura kune vadzidzisi vanozvimiririra, masangano anobatsira, vatapi venhau, uye vanyori. Tumira. Io inozivikanwa kuunza chibereko cheSawaS chinoita kuti tikwanise kutendesa zvinhu zvewebhu kuti zvionekwe uye zvakanyatsorongwa. Kushanda kwekombiyuta yakashandura inoita kukohwa. io chisarudzo chekutanga chemakodhi maviri uye asina-coders.
Kune rumwe rutivi, Extracty inoshandura zvinhu zvewebhu kuti zvive chinhu chakanaka pasina ruzivo rwemashoko. Iko inokubvumira kushandira zviuru zve URL panguva imwe chete kana pane purogiramu. Iwe unogona kuwana ruzivo rwemazana kusvika kune zviuru zvemiromo yedata uchishandisa Extract. Iyi urongwa hwekutsvaga webhu hunoita kuti basa rako rive nyore uye rinokurumidza uye rinomhanya zvakakwana pane yegore.
Portia na Scrapinghub zvakare imwe yepamusoro yekushanda kwekushandisa kwewebhu inoita kuti basa rako rive nyore uye rinotsvaga dhidhiro muzvinhu zvako zvakanaka.Portia anotibvumira kutora mashoko kubva kune mawebsite akasiyana uye haadi chero ruzivo rweprogram. Iwe unogona kuumba template nekutsvaga pazvinhu kana mapeji aunoda kubvisa, uye Portia achaumba girasi rayo risingazobvumi deta rako chete asiwo ichakwezva webhu yako.
2. Pinda mumakwikwi URL:
Kana wapedza kushanda webhu raunoda, danho rinotevera ndopinda URL yowikwikwidzi wako uye tanga kushanda. Zvimwe zvezvigadziri izvi zvichanyora webhusaiti yako yose mukati memaminitsi mashomanana, apo vamwe vanobvisa zvinyorwa kwauri.
3. Tumira dhaka yako yakatsvaga:
Kana imwe data inoda kuwanikwa, danho rekupedzisira nderekutengesa data yako yakatsvaga. Pane dzimwe nzira dzaunokwanisa kutengesa deta yakabudiswa. Iyo web scrapers yega ruzivo mumhando dzematafura, mazita, uye maitiro, zvichiita kuti zvive nyore kune vashanduri kuregera kana kutumira mafaira aidiwa. Nzira mbiri dzakatsigira zvikuru ndeye CSV neJSON. Munenge zvose zvese zvine zvinyorwa zvinyorwa zvinotsigira izvi zvigadziri. Zvinogona kuti isu tishandise tambo yedu uye tachengetedze data nekuisa iyo filename nekusarudza iyo yakarongeka. Tinogonawo kushandisa shanduro yePayipi Pipeline yekupinda. io, Extracty naPortia kuti vagadzire mhedzisiro muipiyuta uye vagadzire mafaira eCVV neJSON apo kupora kuri kuitwa.